Fampirantiana “Velo-Misy”: miainga amin’ny tononkalo ny hosodokon’i Joey Aresoa | NewsMada
“Miaina zavatra mafy isan’andro, miampy ny tsindry avy any ivelany ny Malagasy… Na izany aza, mbola velona izy, sady misy. Manana ny tantarany hotantaraina ny tsirairay…” Izay no namintinan’i Joey Arisoa ny nisafidianany ny “Velo-Misy”. Lohahavitry ny fampirantiana izay nosokafana, omaly, etsy amin’ny Fondation H Andraharo io.
Hita maso ny fihavahan’ny hosodokon’i Joey Aresoa: safidin’ny akora, ny loko, ny karazany ary ny aigam-panahy. Miainga amin’ny tononkalo mantsy ity mpanakanto ity, vao manao ny hosodoko. “Miezaka manambatra ny abstrait, figurative ary ny digital aho. Mifandimpatra tokoa izany, saingy ny tononkalo no manambatra azy”, hoy ny fanazavany.
Araka ny lohahevitra, maka endrika fitantarana amina dingana maromaro ny fampirantiana. Izay ihany koa ny endriky ny fanatontosany ny kantony: tononkalo, hosodoko amina kafe sy loko, fampiasana ny teknolojian’ny sary avy eo fanambarana izany.
Misy fironana mankany amin’ny fanasongadinana ny tontolon’ny vehivavy ny sanganasan’i Joey Aresoa. Akaiky aminy kokoa amin’ny maha vehivavy azy ny miresaka izany anatin’ny sanganasany. Maneho ilay tantara hatrany anefa izany. Maneho ihany koa ilay “Velo-Misy”, raha tarafina amin’ireo sanganasany toy ny “Fagneva”, “Tatao”, “Ranomangandranomaso”, sns.
Ny faraparan’ny taona 2020 no nanomboka niketrika ny fampirantiana i Joey Aresoa. Ny volana marsa kosa izy no tena nanomboka izany, ary nndritra ny fihibohana no tena nahatontosany ny ankamaroany. Nanamafy ny faniriana hitondra avo ny feon’ireo tsy afa-manoatra noho ny zava-misy ny krizy, raha ho an’ity mpanakanto ity.
Marihina fa ny 30 jolay izao vao hifarana ny fampirantiana “Velo-Misy,” ho an’ireo liana.